I-Apricity OS, i-distro enhle nenhle | Kusuka kuLinux
pedrini210 | | Ukubukeka / Ukwenza ngezifiso, Umklamo, Ukusatshalaliswa, I-GNU / Linux, Izaziso
I-Apricity OS Ingachazwa njengohlelo lokusebenza olunembile nolwesimanje kakhulu, ngokuhlanganiswa okuhle kakhulu nezinsizakalo zefu. Inhloso yabathuthukisi bayo kube ukufuna izici ezivelele ezilula ukuzisebenzisa, ukwakheka okuhle futhi okulula ukufinyelela kuzo, ukuze zivelele. I-Apricity OS ayigcini nje ngokuhle futhi iyasebenza, kepha abathuthukisi bayo bafuna ukuyivikela ngokufaka amathuluzi okugcina ubungozi bezokuphepha buncane. Kubuye futhi I-Pushbullet, ithuluzi elaziwa kakhulu lokwabelana ngezaziso phakathi kwamadivayisi.
Ukuhleleka nokwakheka kwe-Apricity OS kuyakhanga impela, sikwazile ukubona imininingwane ephezulu kakhulu ekwakhiweni. Ungawabona wonke amathuluzi ngamandla amahle, ngendlela ehleleke kahle futhi efinyeleleka kalula. Yize i-Apricity OS ingakwazi ukusebenza kumakhompyutha angama-32-bit, okwamanje, lonke ikhwalithi yokusatshalaliswa ayibekelwa phansi.
Ngokulandelayo sizokhuluma ngezici, nokuthi isakhiwo se-Apricity OS sakhiwa kanjani.
Uma sikhuluma ngakho UkusebenzaI-Apricity OS iyaziqhenya ngokusho kusayithi labo ukuthi bangabala ideskithophu yeGnome 3, besebenzisa ama-megabyte angama-500 kuphela, okumangalisa impela uma kubhekwa ukuthi ezinye izinhlelo ezifanayo zisebenzisa inani lememori elidlula i-gigabyte eyodwa ye-RAM akukho okunye ukuphatha ideskithophu. Ngokusobala, lokhu kuthanda izikhathi ze-Apricity boot zemizuzwana nje. Ngokusebenzisa i-Gnome 3, singaqiniseka ukuthi zonke izinto ze-distro zingabongwa ngokushesha nangokushelela, ngaphandle kokunganaki isikhalazo sobuhle.
cunt I-Powerline-Shell, sinekhonsoli yesimanje futhi eguqukayo. Ngamathuluzi ekhompiyutha asebenza kahle kakhulu ongafinyeleleka kalula, kanye nemininingwane evezwe ngendlela ekhangayo, kungokwemvelo ukuthi konke kuyahambisana.
La ukuphepha ngesinye isici esibalulekile. I-Apricity OS isebenza ne- I-Firewall engaqondakali (UFW) ukugcina imininingwane iphephe ngokuphelele. I-UFW idalelwe ukuba ibe yindawo yokubamba umlilo enembile, futhi inesethi yemithetho emisiwe yezidingo zomsebenzisi. Ngaphezu kokukwazi ukwenziwa ngezifiso ukuzivumelanisa nezidingo zabasebenzisi abafuna kakhulu.
Ngakolunye uhlangothi Ikhophi yasenqolobaneni, ingenye yezindlela zokwakha amakhophi wesipele wekhompyutha yakho, ngendlela elula nelula. Uzoba nethuba lokudala izipele ezimbili kwifomu elicindezelwe nelingacindezelwe. Ngokulandelayo, uzokwazi ukuhlukanisa izipele ezingacindezelwe zibe izingxenye ezahlukahlukene. Ingasekela izipele zombhalo nezihleliwe. Ungenza amakhophi wesipele wamafayela ezindaweni ezahlukahlukene, zasendaweni nezikude, ngaphezu kokukhetha okuhlukile onakho, okufana nokwaziswa nge-imeyili.
I-Apricity OS iza ne TLP, imenenja yebhethri ethuthukile eyenza ngcono ukusetshenziswa kwebhethri. Ukucushwa kwayo okuzenzakalelayo kuphelele impela, kepha ngaphandle kokukhawulela ukuthi umsebenzisi angakwazi ukukuhlela ngokuya ngezidingo zabo. Konke lokhu, kanye nokwehla kwezinsizakusebenza ezenziwe ohlelweni, kusivuna emahoreni amaningi okusebenza neqembu.
cunt ICE isistimu ikuvumela ukubeka izinhlelo zakho ozithandayo zewebhu kudeskithophu. Lesi siphequluli sesayithi esithile (SSB) sifuna ukunciphisa inani lezinyathelo phakathi komsebenzisi nokusetshenziswa kohlelo lokusebenza lwewebhu oluthandayo. Okusikhombisa ngokusobala inhloso yalokhu kusatshalaliswa, ukwenza umuzwa womsebenzisi okuthile okukhiqizayo nenhle.
Ukuze sihlale sixhumana namadivayisi akho sithola I-Pushbullet; ithuluzi elikuvumela ukuthi uthumele amafayela nezixhumanisi ezincane phakathi kwamadivayisi akho. Ungaba nezaziso ezisuka kuselula ziye kukhompyutha, kanye nemiyalezo ebhaliwe nezingxoxo kuwo wonke amadivayisi wakho.
Uma ufuna ukwaba inani elikhulu ledatha kuzingxenyekazi eziningi, Ukuvumelanisa ikuvumela ukuthi ukwenze. Uzokwazi ukudlulisa amafayela amakhulu ngokushesha, idatha izobethelwa ngesikhathi ngasinye senqubo yokudlulisa amafayela. Futhi ngamafayela akho nemininingwane yomuntu siqu, kuzoba nokugcinwa kumadivayisi endawo, hhayi efwini.
Phakathi kwe izicelo zifakiwe ezihambisana ne-Apricity OS esinayo; Izithombe ze-Gnome, Ikhalenda le-Gnome, i-Gnome Music, i-Totem, ne-Steam. Zonke zenzelwe ukudala indawo yokusebenza ewusizo kakhulu futhi esebenza kahle, ngohlelo oluvelele oluhle.
ELe distro ibonwa ngokuba uhlelo olwesimanjemanje, oluzenza lubonakale ngenxa yokuthi lungasetshenziswa ezikrinini ezinokulungiswa okuphezulu, nokuthi linciphisa izinkinga zesikaliNgiqamba amanga. Konke ngiyabonga ehambisana ne- I-HiDPI.
I-Apricity OS isuselwa ku-Arch Linux, esebenza ngaphansi komjikelezo wokukhishwa oguqukayo, ngamanye amagama, ukuvuselelwa njalo, lapho kuhlanganiswe nomphathi imidwebo wamaphakeji Pacman. Kuphephile impela ukuthi zonke izibuyekezo zitholakale kuze kube yimanje, futhi, sinciphise noma iyiphi ingozi yokuphepha ekusatshalalisweni. Ngalesi sizathu, nangakho konke lokhu okungenhla, kufanelekile ukusebenzisa i-Apricity OS nokuhlangabezana nazo zonke izimfanelo zayo ezinhle. Njengedatha yokugcina i-Apricity nayoén iyahambisana nemidlalo kanye nesoftware ku-Windows. Kwenziwe kwaba khona ukubonga ku I-PlayOnLinuxy y Iwayini.
Ngokusobala, yi-distro egxile ekwakhiweni nasekusetshenzisweni kwayo, ngokubhekisisa imininingwane yokubonwayo nokufudumala kolwazi lomsebenzisi. Imbangi enkulu yama-distros afana I-ElementaryOS, eyaziwa ngokwakhiwa kwayo kanye nemihlahlandlela yobuhle. Yize kusekelwe ku- I-Arch Linux, inqubo yokufaka nokucushwa kwayo ilula kakhulu, ivumela umuzwa onomvuzo kubasebenzisi beLinux abanolwazi oluncane.
Sikumema ukuba ukulanda le distro bese uyizama!
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Ukubukeka / Ukwenza ngezifiso » I-Apricity OS, i-distro enhle nenhle
Ngokusho kwayo, isebenza ngamakhompiyutha ane-512 RAM kepha yakhelwe kuphela ama-64Bit computer 🙁
Ama-PC angama-64-bit abuyela emuva ku-2006, lapho kukhishwa iWindows Vista.
Esimweni sami, ngine-PC esukela ngo-2006 futhi iprosesa lePentium D lisekela izingcezu ezingama-64 njengokungathi akukho okunye.
UGildardo Cancino kusho
Sanibonani nonke; Ngokwami, ngiyifakile futhi ngiyizame isonto lonke, i-Apricity yangixhumanisa, iyashesha, izinzile, inamaphakethe amahle wokusetshenziswa okuyisisekelo engikunikeza khona (ukubuka ama-movie, ukuhlela isithombe okuyisisekelo, imibhalo yokubhala), futhi bengicabanga ukuthi ngizoyigcina isikhathi eside, kepha ngemuva kwesonto, lapho ngifuna ukuyivula, angikwazanga ukungena, yahlala egubhini, futhi ayizange inikeze umbiko wenkinga, futhi kulapho-ke lapho ngaqala khona ukubona izinto ezithile engingazibonanga ekuqaleni, njengokuthi awukho umphakathi okhuluma iSpanishi ongakunika wona isandla uma kunezinkinga (namanje), cishe bonke abasebenzisi bamanje bangamaNgisi, futhi angikwazi ukuzenza ngiqondwe ngeSpanishi, isiNgisi noma ngamaphupho, ngicabanga ukuthi lokhu kusatshalaliswa kuyathembisa, kepha kudinga ukuvuthwa futhi kulungiswe imininingwane ethile.
Phendula uGildardo Cancino
Njengoba isuselwe ku-Arch, umphakathi mkhulu maqondana nalokho. Angizibheki izixazululo ze-distro uqobo, kepha ngiyibheka ngezikhombo ze-Arch, kumama 😛
Yini ehlukanisa le distro ne-Antergos? Futhi angikunyatelisi ngumbuzo engibe nawo selokhu yaphuma
Ngikholwa ukuthi indawo yokugcina izinto nokuthi lezi zibalo zifaka kusuka ku-iso ngaphandle kwe-inthanethi
UCarlos Reyes kusho
UGildardo Cancino, ukwazile ukumtakula enkingeni?
Phendula uCarlos Reyes
Ngingathanda ukwazi ukuthi ngiyifaka kanjani kusuka ku-USB, ngizamile futhi ayikwazi. Ngilindele impendulo yakho esheshayo.
SEBENZISA RUFUS UKUKHANDA KU-USB
Ngimusha ku-linux kepha ngafaka amanye ama-distros afaka okuyisisekelo ebengivele nginesikhathi esithile ngawo kuze kube yilapho kubonakala ukufiphala futhi ngijabule ngalolu hlelo ngilusikisela ku-100% futhi lusebenze ngokuzinza okukhulu futhi uma lisebenzisa imidlalo namawindows izicelo ngenxa yewayini
Yazi i-IP yakho yomphakathi kusuka esigungwini